Huawei P30 waxaa lagu soo bandhigi doonaa 28-ka Maarso magaalada Paris | Androidsis
Sifeeyay taariikhda soo bandhigida ee Huawei P30
Huawei P30 waa mid ka mid ah taleefannada la filayo qeybtii hore ee sanadka. Bilihii la soo dhaafay way noo imaanayeen daadasho badan taleefannadan. Gaar ahaan qaabeynta iyaga, iyada oo loo maro gacmo gashi, ayaa dhowr jeer la faafiyay. Hadda, daadad cusub ayaa yimid, in kastoo kiiskan taariikhda la soo bandhigayo.
Sida la ogaa in muddo ah, Huawei P30 si rasmi ah looma soo bandhigi doono MWC 2019. Kaliya laabashada casriga ah oo ah nooca Shiinaha ayaa lagu soo bandhigi doonaa munaasabadda ka socota magaalada Barcelona. Astaantu waxay ku celin doontaa istiraatiijiyaddii sanadkii hore. Sidaas, Dhacdo ayaa ina sugaysa dhammaadka Maarso.
Uguyaraan tani waa waxa daadinta cusubi nooga sheegeyso taleefannada kala duwan. Waxay umuuqataa in astaanta shiinuhu ay sharad ku gali doonto shay la mid ah sanadkii hore. Sida dhacdada bandhigga ee Huawei P30 ayaa lagu qaban doonaa Paris. Xusuusnow in munaasabadii sanadkii hore ay sidoo kale ka dhacday caasimada Faransiiska
Ku saabsan taariikhda xareynta Waxaa jira daadad arrintan ku saabsan, in kastoo hadda aan la xaqiijin karin inay run tahay. Waxay noqon laheyd 28-ka Maarso magaalada Paris goorta la soo bandhigi doono dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha. Sidaa darteed, waxay umuuqataa inay ku sharadayn doonaan dhacdo lamid ah tii ay kuqabteen 2018.
Sanadkii hore wuxuu ahaa muhiim u ah dhamaadka-sare ee sumadda. Boodbood tayo leh ayaa la arki karay, iyo sidoo kale kororka iibka. Sidaa darteed, waxay rabaan inay raacaan dhinacyada qaarkood Huawei P30. Noocyadan casriga ah ee casriga ah waxay rajeynayaan inay si xaqiiqo ah u helaan meel ka mid ah heerarka dhamaadka sare. In kasta oo sanadkii hore ay talaabo weyn ka qaadeen arintan.
Waqtigan xaadirka ah ma jiraan wax la xaqiijiyay oo ku saabsan soo bandhigida Huawei P30. Laakiin waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan helno macluumaad dheeri ah ku saabsan soo bandhigida dhammaadka sare ee sumadda Shiinaha. Waxaa jira waxyaabo cusub oo daadanaya. Ama shirkadda lafteeda ayaa dhowaan laga yaabaa inay xaqiijiso soo bandhigiddan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Sifeeyay taariikhda soo bandhigida ee Huawei P30
Google Play wuxuu sii wadi doonaa helitaanka 30% ee barnaamijyada lacag bixinta ah